Arag Sawirrada: Kismaayo oo lagu soo bandhigay waxyaabaha qarxay iyo raggii watay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Arag Sawirrada: Kismaayo oo lagu soo bandhigay waxyaabaha qarxay iyo raggii watay
Arag Sawirrada: Kismaayo oo lagu soo bandhigay waxyaabaha qarxay iyo raggii watay
Kismaayo (Halqaran.com) – Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Jubbaland ayaa ka hortagtay oo soo qabatay shabakad ka kamid ahayd Al-Shabaab oo dilal qorsheysan ka geystay magaalada Kismaayo sidda ay ku sheegtay War kasoo baxay Hay’adda.
Howlgal ay sameeyeen ciidanka Nabad Sugida Jubbaland waxaa Gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cabdullahi Abuukar iyo Cusmaan Maxamed Maxamuud, Marka ay ciidanka amniga gacanta ku dhigayeen raggan waxaa ay gacanta kula jireen fal dambiyeed waxaana ay siteen Bastoolado halka mid kamid ah uu waday Qarax lagu soo dhex qariyay Tarmuus.
Ciidanka waxay tageen oo ay 2 miino iyo 7 Bambo Gacmeed ka soo saareen goobo keyd u ahaa ragga la qabtay oo ay hubka ku duugteen.
Taliyaha hay’adda Nabad Sugida iyo sirdoonka Jubbaland Korneyl Khaalid Shiikh Cabdullaahi ayaa shacabka Jubbaland kaga mahad celiyay sida ay ula shaqeeyaan ciidanka.
Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Jubbaland